Mate 20 Pro စမတ်ဖုန်းရဲ့ အထူးခြားဆုံး ဆန်းသစ်မှုတွေက ဘာတွေလဲ?
Huawei Mate 20 Pro စမတ်ဖုန်းရဲ့ အထူးခြားဆုံး ဆန်းသစ်မှုတွေက ဘာတွေလဲ?
17 Oct 2018 . 1:33 AM
Huawei မိတ်ဆက်ထားလိုက်တဲ့ Mate 20 Pro စမတ်ဖုန်းက လက်ရှိ Android ဖုန်းတွေထဲမှာ အစွာဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ ပြောနိုင်နေပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် LG V40 လို Focal Length မတူတဲ့ ကင်မရာ ၃ မျိုးသုံးထားတယ်၊ Vivo Nex လို In-display Fingerprint Sensor သုံးထားတယ်၊ ဒါထက် အံ့သြစရာကောင်းလာတာက iPhone X လို Face Unlock အသုံးပြုလို့ရမယ့် Authentication ထည့်သွင်းထားတာပါ။
ဒါကြောင့်မလို့ Old Model တွေကို အလာကောင်းပေမယ့် အခါညောင်းသွားပြီလို့ တမင်မပြောရုံတမယ် ၂၀၁၈ စမတ်ဖုန်း နည်းပညာသစ်တွေ Mate 20 Pro ပိုင်ဆိုင်ထားပြီမလို့ Huawei ကြွားလုံးထုတ်နေတာ မဆန်းပါဘူး။ Display ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Curved Screen သုံးပြီး OLED Panel သုံးထားတဲ့ Galaxy Note9ထက်တောင် ပိုသာနေပါသေးတယ်၊ 6.4” Display ကိုမှ 3120 x 1440p Resolution သုံးထားတာမလို့ အားလုံးထက် နှာတဖြား သာနေတယ်ပြောရမလား?
Huawei Mate 20 Pro [Front & Back]
ဘက်ထရီပိုင်းမှာလည်း 4,200 mAh Battery သုံးထားပြီမလို့ Mate 20 Pro ကို ယေဘူယျသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Samsung Galaxy Note9ကို တမင်ယှဉ်ထားမှန်းသိသာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဂိမ်းကစားတဲ့နေရာမှာ 22% ပိုသာတယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည် သုံးစွဲတဲ့အပိုင်းမှာ Note9ထက် 14% ပိုအစားနည်းတယ်လို့ Huawei ပြောဆိုထားလို့ပါ။
Noticeable Galaxy Note9like Edge Screen
နောက်ပြီး Flagship စမတ်ဖုန်းတိုင်း Wireless Charging ထောက်ပံ့ထားပြီဆိုပေမယ့် Mate 20 Pro ပိုစွာနေတဲ့ တခြားအချက်က Qi-Compatible ဖြစ်တဲ့ Device အားလုံးကိုပါ ပြန်အားသွင်းပေးနိုင်မယ့်အချက်ပါ။ ပြောတာတော့ Mate 20 Pro နဲ့ Note9၊ iPhone XS Max ၊ XS တို့ကိုပါ Reverse Wireless Charging နဲ့ အားသွင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုပဲ။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း အမွမ်းတင်ရဦးမယ်ဆိုရင်လည်း IFA 2018 မှာကြွားလုံးထုတ်ထားတဲ့ 7nm Kirin 980 Processor နဲ့ ပွဲထွက်လာတယ်။ Specification အရ Apple A12 Bionic Chip နဲ့ Transistor အရေတွက်ချင်း အတူတူဖြစ်ပြီး Snapdragon 845 ထက် စွမ်းဆောင်ရည်ရော စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့အပိုင်းတွေမှာ အားလုံးသာတယ်။
Withapowerful Kirin SoC
နောက်ပြီး Dedicated Neural Processing Unit သီးသန့်ပါဝင်လာတယ်၊ ဒီကောင်က A.I ပိုင်းအတွက် အားဖြည့်ထားတာဖြစ်ပြီး ကင်မရာပိုင်း၊ System ပိုင်းတွေမှာ P20 Pro ထက်ပိုကောင်းလာတော့မယ်။
ကင်မရာပိုင်းပြောရဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တွေရိုက်ကူးဖို့ Monochrome Sensor အစား Colour Sensor ပြောင်းသုံးလိုက်ပါပြီ။ Huawei ကတော့ Monochrome မလိုအပ်တဲ့အတွက် ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ပြောဆိုထားပြီး Triple-camera Setup ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် 20MP ကို Super Wide Shot အတွက်၊ 40MP ကို သာမန် Wide-angel ရိုက်ဖို့အတွက်နဲ့ Telephoto ပိုင်းကိုတော့ 8MP Camera တွေနဲ့ အားဖြည့်ထားမှာပါ။
Triple Camera with Dual-flash
ဒီလို P20 Pro နဲ့သိပ်မကွာဘူးယူဆရတဲ့ Triple Camera အပြင် ကျောဘက်ကင်မရာခွက်ထဲမှာ Dual-tone Flash စနစ်ပါလာခဲ့ပါပြီ။ Apple iPhone အသစ်တွေမှာ မိတ်ဆက်သွားခဲ့သလိုပေါ့။ နောက်ပြီး ကင်မရာပိုင်းကို A.I 2.0 Image Processing နဲ့ ကိုင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး P20 Pro ထက်စာရင် အများကြီးပိုကောင်းလာပြီလို့ ပြောရပါတော့မယ်။
Back Camera View
Huawei အဆိုရ ကောင်းကင်အရောင်နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်တိုင်း ဘယ်ဟာက လူလဲ၊ နောက်ကွယ်က Object က ဘာတွေလဲ၊ ကောင်းကင်ကဘယ်မှာလဲ စသဖြင့် P20 Pro A.I စနစ်က ကောင်းကောင်း မခွဲခြားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်ကို Mate 20 Pro သုံးထားတဲ့ A.I 2.0 နဲ့ ဖြေရှင်းထားပြီမလို့ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုအဆင့်မြင့်လာပြီ ဆိုရပါတော့မယ်။
နောက်ပြီး ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါ Classic Movie Colour Modes ထည့်သွင်းထားပြီမလို့ ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် Cinematic Mood နဲ့ ရိုက်ကူး လာနိုင်တော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီ Function ကနေရာတိုင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ အသုံးပြုသူတချို့ပြောဆိုနေတာတော့ရှိပါတယ်။
ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာအားသာချက်တွေနဲ့ ပွဲထွက်လာတဲ့ Mate 20 Pro ကို သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် ကင်မရာပိုင်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ FaceID ၊ In-display Fingerprint ၊ 6.4” OLED Display ၊ 4,200 mAh Battery နဲ့ IP68 Standard ပါဝင်လာတဲ့အချက်တွေက ပြိုင်ဖက်တွေထက်သာအောင် ထုတ်ထားမှန်းသိသာပေမယ့် လက်တွေ့မှာရော ဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲ?
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Huawei မိတ်ဆက်သွားတာက Mate 20 Pro ကို Hyper Optical Pattern နဲ့ ရောင်းချသွားဦးမှာဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်က လက်ဗွေရာမထင်အောင်၊ ကိုင်ရပိုအစဉ်ပြေအောင် သပ်သပ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်ဆိုတာပါ။ ဒီလို မိတ်ဆက်ထားလိုက်တဲ့ Mate 20 Pro (RAM 6GB ၊ 128GB) မော်ဒယ်ကို $1,215 နဲ့ ရောင်းချသွားမှာဖြစ်လို့ ဈေးအကြီးဆုံး Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါ။ Reviews & Rating ထွက်လာခဲ့လို့ အပြတ်အသတ် ကွာနေတယ်၊ ပိုကောင်းတယ်ဆိုရင် Mate 20 Pro ဝယ်ကိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား?
Huawei Mate 20 Pro စမတျဖုနျးရဲ့ အထူးခွားဆုံး ဆနျးသဈမှုတှကေ ဘာတှလေဲ?
Huawei မိတျဆကျထားလိုကျတဲ့ Mate 20 Pro စမတျဖုနျးက လကျရှိ Android ဖုနျးတှထေဲမှာ အစှာဆုံး၊ စှမျးဆောငျရညျ အကောငျးဆုံးဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာခဲ့ပွီလို့ ပွောနိုငျနပေါပွီ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ LG V40 လို Focal Length မတူတဲ့ ကငျမရာ ၃ မြိုးသုံးထားတယျ၊ Vivo Nex လို In-display Fingerprint Sensor သုံးထားတယျ၊ ဒါထကျ အံ့သွစရာကောငျးလာတာက iPhone X လို Face Unlock အသုံးပွုလို့ရမယျ့ Authentication ထညျ့သှငျးထားတာပါ။
ဒါကွောငျ့မလို့ Old Model တှကေို အလာကောငျးပမေယျ့ အခါညောငျးသှားပွီလို့ တမငျမပွောရုံတမယျ ၂၀၁၈ စမတျဖုနျး နညျးပညာသဈတှေ Mate 20 Pro ပိုငျဆိုငျထားပွီမလို့ Huawei ကွှားလုံးထုတျနတော မဆနျးပါဘူး။ Display ပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး Curved Screen သုံးပွီး OLED Panel သုံးထားတဲ့ Galaxy Note9ထကျတောငျ ပိုသာနပေါသေးတယျ၊ 6.4” Display ကိုမှ 3120 x 1440p Resolution သုံးထားတာမလို့ အားလုံးထကျ နှာတဖွား သာနတေယျပွောရမလား?
ဘကျထရီပိုငျးမှာလညျး 4,200 mAh Battery သုံးထားပွီမလို့ Mate 20 Pro ကို ယဘေူယသြုံးသပျကွညျ့မယျဆိုရငျ Samsung Galaxy Note9ကို တမငျယှဉျထားမှနျးသိသာပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ ဂိမျးကစားတဲ့နရောမှာ 22% ပိုသာတယျ၊ စှမျးဆောငျရညျ သုံးစှဲတဲ့အပိုငျးမှာ Note9ထကျ 14% ပိုအစားနညျးတယျလို့ Huawei ပွောဆိုထားလို့ပါ။
နောကျပွီး Flagship စမတျဖုနျးတိုငျး Wireless Charging ထောကျပံ့ထားပွီဆိုပမေယျ့ Mate 20 Pro ပိုစှာနတေဲ့ တခွားအခကျြက Qi-Compatible ဖွဈတဲ့ Device အားလုံးကိုပါ ပွနျအားသှငျးပေးနိုငျမယျ့အခကျြပါ။ ပွောတာတော့ Mate 20 Pro နဲ့ Note9၊ iPhone XS Max ၊ XS တို့ကိုပါ Reverse Wireless Charging နဲ့ အားသှငျးပေးနိုငျမယျဆိုပဲ။
စှမျးဆောငျရညျပိုငျး အမှမျးတငျရဦးမယျဆိုရငျလညျး IFA 2018 မှာကွှားလုံးထုတျထားတဲ့ 7nm Kirin 980 Processor နဲ့ ပှဲထှကျလာတယျ။ Specification အရ Apple A12 Bionic Chip နဲ့ Transistor အရတှေကျခငျြး အတူတူဖွဈပွီး Snapdragon 845 ထကျ စှမျးဆောငျရညျရော စှမျးအငျခြှတောတဲ့အပိုငျးတှမှော အားလုံးသာတယျ။
နောကျပွီး Dedicated Neural Processing Unit သီးသနျ့ပါဝငျလာတယျ၊ ဒီကောငျက A.I ပိုငျးအတှကျ အားဖွညျ့ထားတာဖွဈပွီး ကငျမရာပိုငျး၊ System ပိုငျးတှမှော P20 Pro ထကျပိုကောငျးလာတော့မယျ။
ကငျမရာပိုငျးပွောရဦးမယျဆိုရငျတော့ ပွတျသားတဲ့ပုံရိပျတှရေိုကျကူးဖို့ Monochrome Sensor အစား Colour Sensor ပွောငျးသုံးလိုကျပါပွီ။ Huawei ကတော့ Monochrome မလိုအပျတဲ့အတှကျ ဖယျရှားလိုကျတယျပွောဆိုထားပွီး Triple-camera Setup ကို ပွောရမယျဆိုရငျ 20MP ကို Super Wide Shot အတှကျ၊ 40MP ကို သာမနျ Wide-angel ရိုကျဖို့အတှကျနဲ့ Telephoto ပိုငျးကိုတော့ 8MP Camera တှနေဲ့ အားဖွညျ့ထားမှာပါ။
ဒီလို P20 Pro နဲ့သိပျမကှာဘူးယူဆရတဲ့ Triple Camera အပွငျ ကြောဘကျကငျမရာခှကျထဲမှာ Dual-tone Flash စနဈပါလာခဲ့ပါပွီ။ Apple iPhone အသဈတှမှော မိတျဆကျသှားခဲ့သလိုပေါ့။ နောကျပွီး ကငျမရာပိုငျးကို A.I 2.0 Image Processing နဲ့ ကိုငျတှယျသှားမှာဖွဈပွီး P20 Pro ထကျစာရငျ အမြားကွီးပိုကောငျးလာပွီလို့ ပွောရပါတော့မယျ။
Huawei အဆိုရ ကောငျးကငျအရောငျနောကျခံထားပွီး ရိုကျကူးလိုကျတဲ့ပုံရိပျတိုငျး ဘယျဟာက လူလဲ၊ နောကျကှယျက Object က ဘာတှလေဲ၊ ကောငျးကငျကဘယျမှာလဲ စသဖွငျ့ P20 Pro A.I စနဈက ကောငျးကောငျး မခှဲခွားနိုငျခဲ့ဘူးဆိုပါတယျ။ ဒီအခကျြကို Mate 20 Pro သုံးထားတဲ့ A.I 2.0 နဲ့ ဖွရှေငျးထားပွီမလို့ လုပျဆောငျခကျြပိုအဆငျ့မွငျ့လာပွီ ဆိုရပါတော့မယျ။
နောကျပွီး ဗီဒီယိုရိုကျတဲ့အခါ Classic Movie Colour Modes ထညျ့သှငျးထားပွီမလို့ ရုပျရှငျဆနျဆနျ Cinematic Mood နဲ့ ရိုကျကူး လာနိုငျတော့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ဒီ Function ကနရောတိုငျးအလုပျမလုပျဘူးလို့ အသုံးပွုသူတခြို့ပွောဆိုနတောတော့ရှိပါတယျ။
ဒီလို စိတျဝငျစားစရာအားသာခကျြတှနေဲ့ ပှဲထှကျလာတဲ့ Mate 20 Pro ကို သုံးသပျကွညျ့ရမယျဆိုရငျ ကငျမရာပိုငျးနဲ့ စှမျးဆောငျရညျပိုကောငျးလာတယျလို့ ပွောရမှာပါ။ FaceID ၊ In-display Fingerprint ၊ 6.4” OLED Display ၊ 4,200 mAh Battery နဲ့ IP68 Standard ပါဝငျလာတဲ့အခကျြတှကေ ပွိုငျဖကျတှထေကျသာအောငျ ထုတျထားမှနျးသိသာပမေယျ့ လကျတှမှေ့ာရော ဘယျလောကျစှမျးဆောငျနိုငျမလဲ?
နောကျဆုံးအနနေဲ့ Huawei မိတျဆကျသှားတာက Mate 20 Pro ကို Hyper Optical Pattern နဲ့ ရောငျးခသြှားဦးမှာဖွဈပွီး ရညျရှယျခကျြက လကျဗှရောမထငျအောငျ၊ ကိုငျရပိုအစဉျပွအေောငျ သပျသပျဒီဇိုငျးထုတျထားတယျဆိုတာပါ။ ဒီလို မိတျဆကျထားလိုကျတဲ့ Mate 20 Pro (RAM 6GB ၊ 128GB) မျောဒယျကို $1,215 နဲ့ ရောငျးခသြှားမှာဖွဈလို့ ဈေးအကွီးဆုံး Android စမတျဖုနျးဖွဈလာခဲ့ပွီလို့ပဲ ပွောရတော့မှာပါ။ Reviews & Rating ထှကျလာခဲ့လို့ အပွတျအသတျ ကှာနတေယျ၊ ပိုကောငျးတယျဆိုရငျ Mate 20 Pro ဝယျကိုငျဖို့ အဆငျသငျ့ပဲလား?